Ogaden News Agency (ONA) – Keiser Report: Chinahu waa inay ka baxaan Ogadeniya oo qorshahoga Shidaalka ee Ku aadan Ogadeniya ay ka noqdaan sidas waxa yiri Thomas Mountain.
Keiser Report: Chinahu waa inay ka baxaan Ogadeniya oo qorshahoga Shidaalka ee Ku aadan Ogadeniya ay ka noqdaan sidas waxa yiri Thomas Mountain.
Posted by ONA Admin	/ December 30, 2011
Barnaamijka Keiser Report ee kabaxa RT-TV ayaa waxa ka hadlay Wariyaha u dooda qaarada Geeska Afrika oo ah nin u dhashay wadanka Mareykanka isla mar ahaantaasna ah wariyaha kaliya ee sida xorta ah ugasoo warama geeska Afrika. HOOS KA DAAWO FILIMKA Barnaamijkan
Keisar waxa uu weydiiyay suxufiga innuu ka jawaabo xaalada nabad galyo ee Geeska afrika meesha ay marayso?
Thomas Mountain ayaa jawaabtiisii ku billaabay nolosha geeska afrika waxay maraysa marxalad aad u qallafsan oo kasii dar ah. Cunno yarida iyo Macaluusha ka oogan Ogadeniya way kasii dartay tacadiga iyo xasuuqa lagu hayo dadkaas somalida ahi way sii kordhaysa maalinba maalinka ka danbeysa. dhibaatada somaliya way sii xoogaysatay sidoo kale tusaale haddaan soo qadano Wadanka Eritrea waxaa dhibaatadiisii uu horey ulatacaalayay ee cunno yarida aheyd loogusii kordhiyay in beesha caalamku ay cunaqabatayn korka uga sii tuurto.
Keiser waxa uu wax ka weydiiyay suxufigaan su’alo ay kamid yihiin barnaamij Afrika loogu talo galay oo lagumagacabo Deeqda mucawadamada ah oo hayado faro badna oo kamid ahi wadanka USA ay ku dhawaaqeen inay Afrika ku garab istaagi donaan. Deeqdaas oo loogumagac darey Daryeelka Afrika oo middaas oo uu hormuud u yahay Maalqabaynka Billgate oo ah ninka adduunka ugu dhaqaale badan. Bill gate waxa uu daryeelkan Afrika uu ugu talo galay innuu ku dabargooyo cudurka kaneecada isaga oo siinaya Afrika daawo billaash ah. Hadaba deeqdan affrika lasiinayo miyay meel martay oo dadki magaadhay dhibaatose makusoo kordhisay Afrika?.
Thomas Mountain ayaa jawaabtaas ka bixiyay in fikrada wanaagsan ee Bilgate jirto balse talaalka bilaashka ah ee Bilgate bixinayo inay garab socoto daawo kale oo qasab tahay in lagato si talaalkaas kaneecadu u meelmaro ama u shaqqeyo midaas oo lacag badan ay ku baxayso. daawadaas kale waxaa sameysa shirkada (GSK) GlasxoSmithKline oo ay tahay inlaga iibsado.
Thomas mountain waxa uu kahadlay in wadamada Ree galbeedku ay laba waji ku shaqeynayaan. Dhulka Somalida Ogadeniya waxa ka dhacday ayuu yiri macaluul iyo abbaaro iyo cuduro dowlada Ethiopiana waxay diiday in kaalmo lagaadhsiiyo iyadoo hayadihii oo idil kasoo saartay dhulkaas. Walina waxa lasii siinaya deeqdii gargaarka aheyd oo wadanka Ingiriiska oo kale lacag badan ayuu siiyay waqtigaas. Dhinaca kale waxa cad in wadanka Ethiopia lacagta lasiiyo ay ku gattaan hub badan. Sidoo kale wadamada ree galbeedku iyaga oo sheegaya inay Geeska Afrika cawinayaan ayay hadana dhinaca kale ka hubeynayaan Ethiopia si ay dhulkaas qalaalase uga rido.
Wadanka Eritrea waa wadanka kaliya ee Afrika ku yaala ee dabar jaray cudurka Kaneecada. iyaga oo isticmaalin wax daawo ah iyo talaalo toona. Thomas mountain isaga oo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in wadamada Ree galbeedku ay rabaan inay qalaalase abbuuraan oo hadana ay iyagu qalalahaas ay maamulaan.
Mudane Thomas waxa uu aad u eedeeyay isaga oo xogag iyo caddeymo isticimalaya daggaalka garabka og ee Taliska Zenawi ku hayo shucuubta geeska Afrika sida Somalida Ogadeniya, somaliya iyo Eritrea.
Keisar oo barnaamijkiisan si khaasa ugu eegayay arrimaha geeska Afrika ayaa waxa uu weydiiyay suxufiga markale innuu bal kawaramo in daggaal u dhaxeynkara wadamada Ree Galbeedka iyo China uu ka dhici karo Afrika iyo inkale madama Chinuhu saameyn iyo xoog badan ku yeeshay gobolkaas.
Thomas mountain ayaa arrinkaas ku dheraday waxa uuna uu boggaadin usoo jeediyay saameynta Chinuhu ku yeeshay Afrika qaasatan Geeska Afrika: chinuhu waxay kaga gadisanyihiin wadamada Ree galbeedka waxay la yimadeen maal galin oo dadka waxay u qabtaan waxyaalo badan ayuu yiri isaga oo tusaale u soo qadanaya kaabayasha dhaqale iyo midka horumarineed ay ga fuliyeen wadanka Eritrea. Balse waxa kale oo uu dhaliil ugu soo jeediyay Chinaha sida ay u maamuleen xidhiidhka shidaal raadinta ah ee Geeska Afrika isaga oo tusaale usoo qaatay shidaalka Ogadeniya: waxa aan ugu baaqaya oon uga digayaa ayuu yiri China inaysan ku dagmin shidhaalka Ogadeniya. Waayo waxa ay ka qeyb qaateen xasuuqa ka socda dhulka Ogadeniya ee Taliska Zenawi ku hayo ummadaas. Waxaan ka codsnaaya inay kanoqdaan qorshogan ku u adan shidaalka Ogadeniya kana baxaan dhulkaas. Thomas ayaa sidoo kale xusay in dadkaas Somalida Ogadeniya ay kheyraadkoda illashanayaan isaga oo carabka ku dhuftay in hadda ka hor ciidamada ONLF ay cagta mariyeen saldigyo ciidan oo ilaalo u ahaa shirkadaha shidalka ee chiniiska.
Hadaba filimkii Barnaamijkii Keisar report hoos ka fiirso ( waxa uu ka bilabmaya wareysiga Thomas Mountain daqiiqada 15:30) hoos ka jiid si aad u gaadho